Marka la eego mikroskoobka: Awoodo aad u xoog badan oo loo yaqaan 'APIs' iyo culeysyo badan oo sun ah - Medicinerawmaterials.com
Dr William Sanders wuxuu ka hadlayaa isbeddelada ku saabsan soo saarista iyo soo saarista wax soo saarka dawooyinka firfircoon ee aadka u firfircoon (HPAPIs) iyo culeyska mushaarka ee sunta antibody conjugates (ADCs).
Sidee isbeddelada ugu dambeeyay ee warshadaha dawooyinka u saameeyeen ururada wax soo saarka qandaraaska (CMOs), gaar ahaan marka loo eego HPAPIs?
15-kii sano ee la soo dhaafay, waxaa jiray isbadal weyn oo diiradda lagu saaray daaweynta ka hortagga kansarka. Natiijo ahaan, saamiga HPAPIs iyo ADCs ee dhuumaha ay ka soo jeedaan shirkadaha dawooyinka badankood ayaa si aad ah kor ugu kacay. Kordhinta dhuunta caafimaad ee HPAPIs iyo ADCs waxay bedeshay dalabaadka la-hawlgalayaasha wax soo saarka qandaraaska waxayna kordhisay baahida loo qabo awoodaha maaraynta awoodda sare leh. Natiijadu waa yaraanta awoodda wax soo saar ee adduunka, waqtiyo badan oo hogaamineed oo loogu talagalay bilaabista mashruuca iyo dib udhac dheer oo ku yimaada horumarka murashaxiinta daroogada iyada oo loo marayo dhuumaha bukaan socodka.
Fahamka warshadaha oo dhan ee ku saabsan sunta sunta ah ee walxaha aadka u xoogan ayaa si aad ah u kordhay maaddaama dhuumaha bukaan-socodka ay ballaadheen. Helitaanka iyo falanqaynta noocyada kala duwan ee xogta sunta sunta ah waxay keeneen hawl culus oo xadidan soo-gaadhista iyo hirgalinta hab-dhaqanno nadaafadeed oo adag oo loogu talagalay in lagu xoojiyo nabadgelyada shaqaalaha. Isku darka tiro aad u tiro badan oo ah HPAPIs, faham buuxa oo ku saabsan sunta iyo awooda xaddidan ee lagula tacaalayo iskudhafyada aadka u xoog badan ee warshadaha CMO ayaa culeys saaraya xadka CMOs si ay ula kulmaan waxyaabaha ay ka filayaan macaamiishooda pharma.
Sidee falsafadda horumarka geeddi-socodka u beddelaysaa natiijada?
Nidaamka kiimikada lafteeda isma beddelo sababtoo ah awoodda isku dhafan ee baaritaanka. Ficilcelinta falcelinta, qiimeynta halbeegga halbeegga muhiimka ah iyo daraasadaha xoogga geeddi-socodka ayaa ku habboon iyadoon loo eegin awoodda isku dhafan. Xaaladaha badankood, HPAPI-yada ganacsiga iyo ADC-yada waxay u baahan yihiin tiro aad u yar oo ah API baahida ugu sarreysa. Xaqiiqadani waxay fureysaa farsamooyin kala duwan oo farsamayn ah oo sida caadiga ah loo arko inaysan iswaafaqi karin (tusaale ahaan, nadiifinta tiirarka chromatographic) iyadoo la adeegsanayo wax soosaarka ganacsi ee dhaqameed, awood badan oo API-yada ah. In kasta oo shuruudaha horumarinta kiimikada ee HPAPIs ay la mid noqon karaan ama xitaa ka xaddidan yihiin API-yada dhaqameed, fahamka dhow ee farsamooyinka wax soo saarka nidaamka xidhan iyo teknolojiyada xakamaynta ayaa lagama maarmaan u ah soo saarista HPAPIs. Naqshadaynta xarunta, tiknoolajiyada go'doominta iyo guud ahaan wax soo saarka ayaa noqon kara mid xaddidan marka loo eego hannaanka maaraynta marka la barbar dhigo kuwa ka shaqeeya soo saarista caadiga ah ee API. Si taxaddar leh loo tixgeliyo qulqulka qalabka iyo qalabka waa inuu ahaadaa qayb muhiim ah oo ka mid ah wajiga horumarka laguna daro qorshaha wax soo saarka. Intaa waxaa sii dheer, qiimeynta joogtada ah ee tikniyoolajiyadaha xakamaynta cusub iyo farsamooyinka inta lagu jiro wajiga horumarinta ayaa muhiim u ah guusha.
Waa maxay farsamooyinka muhiimka ah ee muhiimka u ah soosaarka HPAPI?
Naqshadeynta kalluumeysiga, naqshadeynta shaybaarka iyo hababka xakamaynta ayaa muhiim u ah soosaarka nabdoon ee HPAPIs. Dhamaadkii qarnigii 20aad, awoodaha xakamaynta ayaa aad ugu xaddidanaa waxsoosaarka CMO iyo dhaqamada caadiga ah ee waqtigaas la shaqaaleeyay ayaa lagu hagaajiyay inay ka koobnaadaan iskudhafyo ku saleysan qiimeynta isbadalka sunta. Isbeddelka tikniyoolajiyadda iyo ogaanshaha sida ayaa si weyn kor ugu qaaday nabadgelyada shaqaalaha, laakiin tani waxay la timid koror u dhigma qiimaha naqshadeynta xarunta, dhismaha iyo hawlgalka. Bilowgii 2000 meeyadii, kaliya qayb yar oo ka mid ah Merck's SAFC® faylalka tacliimeed wuxuu ka koobnaa HPAPIs ama xamuul lacag badan oo sun ah. Maanta, waa qayb muhiim ah oo Merck ah SAFC® faylalka tacliimeed wuxuu u baahan yahay xakamaynta HPAPI. Isbeddelkani wuxuu si guud u khuseeyaa warshadaha, taasoo keentay maalgashiyo muhiim ah oo ku saabsan casriyeynta xarunta ee lagama maarmaanka u ah soosaarayaasha qandaraaska doonaya inay ku tartamaan booska HPAPI. In kasta oo la waafajinta farsamooyinka wax soo saarka dhaqameed si loo kordhiyo xakamaynta ayaa ahmiyadda ugu weyn ee soo saarista HPAPI, tiknoolajiyada cusub sida soosaarka socodka joogtada ah (CFM) waa mid rajo badan leh, halkaasoo nidaamyada xiran looga faa'iideysan karo in lagu hagaajiyo ku dhaqanka dhaqanka xakamaynta. CFM waa mid soo jiidasho leh soosaarka HPAPI waxayna siisaa ballanqaad aad u weyn
horumarinta habka kiimikada khibrad u leh iyo kooxaha injineernimada si loo qorsheeyo habsami u socodka mustaqbalka oo ka ammaan iyo waxtar badan.
Waa maxay saameynta kale ee sunta weyn iyo diiradda la saarayo dhaqanka nadaafadda warshadaha ay muhiim tahay in la aqoonsado?
Saamaynta ugu weyn ayaa ah in hawlgalada unugga HPAPI uu qaato waqti dheer. Hawlgallo badan oo nidaamsan ayaa xaddidan waxayna kordhiyaan waqtiga loo baahan yahay marka la barbar dhigo hawlgallada cutubyada taariikhiga ah. Ugu dambeyntiina, tani waxay u horseedi kartaa habsocodyada wax soo saarka ee qaaliga ah. Iyadoo aan loo eegin, badbaadada shaqaaluhu had iyo jeer waxay u baahan tahay tixgelin dheeraad ah iyo qiil u sameynta kharashyada. Macaamiisha Pharma waxay u baahan yihiin inay ka feejignaadaan suurtagalnimada waqtiyada dheeraadka ah ee hogaaminta maandooriyaha HPAPI iyo culeysyada ADC. Ugu dambeyntiina, ballanqaadka daaweyntan cusub, waxtarka kordhay, nabadgelyada iyo natiijooyinka bukaan socodka ee ka sii wanaagsan ayaa ka badan kharash kasta oo dheeri ah oo laga helo hubinta amniga kuwa loo xil saaray soo saarista daawooyinka mustaqbalka leh ee mustaqbalka leh.
Will waa Agaasimaha Horumarinta Nidaamka ee Millipore Sigma's Madison, WI SAFC® xarunta waxayna si toos ah ugu lug laheyd horumarinta noocyo kala duwan oo ganacsi oo yaryar ah HPAPIs iyo culeysyada sunta ee ADCs. Isagu waa farmashiye dabiici ah oo dabiici ah oo tababar leh wuxuuna shahaadada PhD ka qaatay Jaamacadda Wisconsin. Wuxuu leeyahay khibrad 20 sano ka badan dhanka kiimikada iyo habka kiimikada, 14-kii sano ee la soo dhaafay wuxuu ku qaatay MilliporeSigma ee Madison, WI iyo Gillingham, UK. Waxyaabaha uu hadda xiiseynayo waxaa ka mid ah hirgelinta istiraatiijiyad horumarineed oo otomaatig ah, PAT iyo xallinta maaraynta xogta dhammaystiran ee horumarinta geeddi-socodka.